मे 27, 2019 मे 27, 2019 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments अशान्ति, डा. राम बहादुर बोहरा
खाली समय सैतानको घर भन्ने उखान त सुन्नु भएको होला । जब-जब मानिस बेरोजगार हुन थाल्दछ खाली समयमा थुप्रै कुरा सोच्ने अवसर पाउन थाल्दछ । आज मै खाउ मै लगाउ भन्ने भावना नभएर हामीले खाउँ हामीले केही गरौं भन्ने भावनाको बिकास जबसम्म नेपालमा हुदैन तबसम्म शान्ति सम्भव कदापि हुने छैन ।
यदि जिल्ला, अंचल र गाउँ-गाउँमा सरकारले उद्योग स्थापना गराउन सकेको भए मानिस खाली हुने थिएनन् मानिस खाली नभए सोच्ने अवसर मिल्ने थिएन । देशलाई अशान्तितर्फ धकेल्ने काम स्वार्थले गरेको देखिन्छ । बजेट निकासा त हुन्छ विकासका लागि नभएर व्यक्तिगत स्वार्थमा खर्च हुन्छ । दुरगामी विचार नभएको हुनाले अशान्ति फैलिएको छ । यही अवस्था रहेमा देश ओरालो लाग्नेछ ।
यहाँ धर्म परिवर्तन गराउन, अरूको घर भत्काउन अधिकार छिन्ने जस्ता काममा ध्यान पुगेको छ । तर व्यक्ति बेरोजगार भए आन्दोलन गर्न सक्छन् भन्नेतिर कसैको ध्यान पुग्न सकेको छैन । यहाँ सिटको दुरुपयोग भएको छ । सिट त ५ बर्षको लागि मात्र हो यो पाँच बर्षभित्र मैले केही गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास जबसम्म हुदैन तबसम्म यहाँ शान्ति सम्भव छैन भन्ने मलाई लागेको छ ।
एउटा कुरा हमेसा हामीले बुझ्न आवश्यक छ त्यो हो जनताको समस्या के हो ? के चाहन्छन् जनता ? आज जतिपनि आन्दोलन भए सवै व्यक्तिगत स्वार्थमा भए कमाउनेले कमाए दु:ख भोग्नेले भोगे यसैको प्रतिफल आज जनताले भोग्दैछन् ।
← खोप र यसका फाइदाहरु
घुम्न निस्किनु भन्दा अघि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु →